UGoogle usungula ngokwesiqhelo, usetyenziso lokufezekisa inkcitho yedatha esezantsi | Iindaba zeGajethi
UGoogle usungula ngokusesikweni, usetyenziso ukufezekisa iindleko ezisezantsi zedatha
Ukuba sinyanisekile, kunokwenzeka ukuba okwangoku ngesibonelelo esikhulu esikhoyo ngokweedatha zedatha yokuhamba, ukumilisela usetyenziso lokulawula inkcitho kunokuba yinto engekho ngqiqweni. Nangona kunjalo, ukusuka kuGoogle abafuni ukuyeka kwaye bazise ngokusesikweni.
Nangona injongo yale app ihamba phambili. Kuyinyani ukuba kwiinguqulelo ezimbalwa ze-Android umsebenzisi uneziko apho aziswa khona ngokweenkcukacha ukuba ingakanani idatha ayisebenzisayo neselfowuni. Kodwa nge Ngokwenyani le nto ifuna ukuba iqhubeke inyathelo elinye, ukongeza ekunikezeleni ngomsebenzi ongakumbi ngothungelwano lweWiFi.
Okokuqala kufuneka sikuxelele ukuba ngokusesikweni ligama lokugqibela elifumana imveliso leyo wayekwezilingo iinyanga ePhilippines phantsi kwegama "Unxantathu". Umsebenzi we-Datally kukubonelela ngolwazi oluneenkcukacha kumsebenzisi wazo zeziphi ii -apps ezisebenzisa olona ncedo lwedatha yazo kunye nokuzilungisa.
Kwakhona, kunye noluhlu olunikezelwa sisicelo, umsebenzisi unokuvula okanye ukucima umsebenzi wokugcina idatha. Oko kukuthi, xa uluhlu lwethu olupheleleyo lweeapps ezisebenzisa i-intanethi ephathekayo ibonakala, sinako yazi ukuba yeyiphi eyona inkunkuma kunye neyeza. Ewe kunjalo, kuya kubakho iqhosha eliqhelekileyo eliya kuthi lenze ugcino lwedatha ngokubanzi.
Kwelinye icala, njengoko besikulindele, ngokuSebenzayo uza kukubonelela Ulwazi malunga neenethiwekhi ezivulekileyo zikaWiFi. Lo msebenzi, obonakala uqhelekile, uya kuba yindawo yogcino lwamaziko oluntu (amathala eencwadi, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, njl. Njl.) Abhalise kwi-Intanethi ukuba banonxibelelwano lweWiFi. Ukongeza, ukwenza yonke into ibengcono, olu luhlu lweendawo ezivulekileyo ze-WiFi zinokuxabiswa ngabanye abasebenzisi kwaye wazi ngesandla sokuqala ukuba kufanelekile ukusebenza apho okanye kungcono ukhethe enye indlela.
Layisha: Google Play
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » UGoogle usungula ngokusesikweni, usetyenziso ukufezekisa iindleko ezisezantsi zedatha
Esi sihlunu singesokuthwala amaxesha ali-1.000 XNUMX obunzima baso
Iimveliso zomsindo ezintsha ezisungulwe yinkampani ye-Energy Sistem yaseSpain